Umgaqo wabucala- Uniproma-Xa iChemistry isebenza
I-Uniproma iyayihlonipha kwaye iyayikhusela imfihlo yabo bonke abasebenzisi benkonzo. Ukubonelela ngeenkonzo ezichanekileyo nezenzelwe wena, i-uniproma iya kusebenzisa kwaye ichaze iinkcukacha zakho ngokungqinelana nemigaqo yalo mgaqo-nkqubo wabucala. Kodwa i-uniproma iya kuluphatha olu lwazi ngenqanaba eliphezulu lokukhuthala kunye nokuqonda. Ngaphandle kokuba kubonelelwe ngenye indlela kulo mgaqo-nkqubo wabucala, i-uniproma ayizukuxela okanye inike olo lwazi kubantu besithathu ngaphandle kwemvume yakho. I-Uniproma izakuhlaziya lomgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha. Xa uvuma kwisivumelwano sokusetyenziswa kwenkonzo ye-uniproma, uya kuthathwa njengovumile kuyo yonke imixholo yalo mgaqo-nkqubo wabucala. Umgaqo-nkqubo wabucala yinxalenye yesivumelwano sokusetyenziswa kwenkonzo ye-uniproma.
1. Ububanzi besicelo
a) Xa uthumela i-imeyile yophando, kuya kufuneka ugcwalise ulwazi lweemfuno ngokwebhokisi yokucela ukubuza;
b) Xa undwendwela iwebhusayithi ye-uniproma, i-uniproma iya kubhala ulwazi lwakho lokubhrawuza, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwiphepha lokundwendwela, idilesi ye-IP, uhlobo lwesiphelo, ingingqi, umhla wokutyelela kunye nexesha, kunye neerekhodi zekhasi lewebhu olifunayo;
a) Ulwazi lwegama eliphambili olifakayo xa usebenzisa inkonzo yokukhangela enikezelwa yiwebhusayithi ye-uniproma;
b) Ulwazi oluchanekileyo lolwazi oluqokelelwe yi-uniproma, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimisebenzi yokuthatha inxaxheba, ulwazi lokuthengiselana kunye neenkcukacha zovavanyo;
c) Ukophulwa komthetho okanye imigaqo ye-uniproma kunye namanyathelo athathwe yi-uniproma ngokuchasene nawe.
2. Ukusetyenziswa kolwazi
a) Uniproma ayizukubonelela, ithengise, irente, yabelane okanye ithengise ngolwazi lwakho lomntu ongomnye ongadibaniyo, ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili, okanye umntu wesithathu kunye ne-uniproma ngokukodwa okanye ngokudibeneyo bakubonelele ngeenkonzo, nasemva kokuphela kwento iinkonzo, ziya kuthintelwa ekufikeleleni kulo lonke olo lwazi, kubandakanya nezo zazifikeleleka ngaphambili kubo.
b) I-Uniproma ayivumeli naliphi na iqela lesithathu ukuba liqokelele, lihlele, lithengise okanye lisasaze ngokukhululekileyo ulwazi lwakho lomntu nangayiphi na indlela. Ukuba nawuphi na umsebenzisi wewebhusayithi ye-uniproma ufunyenwe esenza ezi zinto zingasentla, i-uniproma inelungelo lokusiphelisa isivumelwano senkonzo naloo msebenzisi kwangoko.
c) Ngenjongo yokukhonza abasebenzisi, i-uniproma inokukunika ulwazi onomdla kulo ngokusebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekuthumeleni ulwazi ngemveliso kunye nenkonzo, okanye ukwabelana ngolwazi namaqabane e-uniproma ukuze bakwazi ukukuthumela ulwazi malunga neemveliso kunye neenkonzo zabo (le yokugqibela ifuna imvume yakho kwangaphambili).
3. Ukuxelwa kolwazi
I-Uniproma iya kuchaza yonke into okanye inxenye yolwazi lwakho ngokuhambelana neminqweno yakho okanye amalungiselelo omthetho kwezi meko zilandelayo:
a) Ukuxela kumntu wesithathu ngemvume yakho yangaphambili;
b) Ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ozifunayo, kufuneka wabelane ngeenkcukacha zakho nomntu wesithathu;
c) Ngokwamasolotya afanelekileyo omthetho okanye iimfuno zamacandelo olawulo okanye ezomthetho, xela kwiqela lesithathu okanye kwicandelo lolawulo okanye lezomthetho;
d) Ukuba wophula imithetho efanelekileyo kunye nemigaqo ye-China okanye isivumelwano seenkonzo ze-uniproma okanye imigaqo efanelekileyo, kufuneka uxele kumntu wesithathu;
f) Kwintengiselwano eyenziwe kwiwebhusayithi ye-uniproma, ukuba naliphi na iqela kwintengiselwano lizalisekisile okanye ngokuyinxenye lizalisekisile uxanduva lwentengiselwano kwaye lenze isicelo sokwazisa ngolwazi, i-uniproma inelungelo lokuthatha isigqibo sokunika umsebenzisi ulwazi oluyimfuneko olufana nonxibelelwano ulwazi lomnye umntu ukulungiselela ukugqitywa kwentengiselwano okanye ukusonjululwa kweembambano.
g) Okunye ukubhengezwa okubonwa njenge-uniproma kufanelekile ngokwemithetho, imigaqo okanye imigaqo-nkqubo yewebhusayithi.